Medium Steam Sterilizers (Autoclaves) Fekitori | China Medium Steam Sterilizers (Autoclaves) Vagadziri uye Vatengesi
MAST-V (Vertical inotsvedza musuwo, 280L-800L)
MAST-V inzira inokurumidza, yakaomarara uye inoshandisirwa sterilizer iyo yakatsvagurudzwa ikagadziridzwa zvinoenderana nezvazvino zvinodiwa kuchipatara uye CSSD. Iyo yakagadzirirwa uye inogadzirwa inosanganisa yakakwira kugona nemutengo-unoshanda, nepo ichipa yakakwira kushanda kuvimbika uye nyore kugadzirisa.
Dhizaini yemakamuri anoenderana nehurumende GB1502011, GB8599-2008, CE, European EN285 standard, ASME nePED.
MCSG Kwakachena Magetsi Steam jenareta
Midziyo iyi inoshandisa chiutsi chemaindasitiri kupisa mvura yakachena kugadzira hutu hwakachena. Inoshandiswa zvakanyanya mune zvekurapa, zvemishonga uye zvekudyara maindasitiri ekupa mhando yemhando yepamusoro hwemhando yepamusoro sterilization. Iyo inosangana nezvinodiwa zvehunhu hwemhando uye inogona kunyatso kudzivirira yero kurongedza uye yakanyorova bhegi dambudziko rinokonzerwa nehurombo hwemhepo mhando.
Yakachena Q Yakachena Electric Steam jenareta
Yakachena Q dzakateedzana dzakachena dzemagetsi jenareta inogadzira yakachena huni nekupisa yakachena mvura. Iyo ine zvakanakira diki saizi, nekukurumidza kupisa, pasina kusvibiswa, nyore kushanda uye kwakanyanya kuvimbika. Iyo inogona kunyatso kugadzirisa iyo ngura kusvibiswa pane chimbo uye kupfeka zvinhu pasuru.
Inogona kushandiswa zvakanyanya mu department re stomatology uye ophthalmology, yekushandisa kamuri uye mamwe masangano ekurapa. Iyo inokodzera zvese zvakaputirwa kana zvisina kuvhurwa zviridzwa zvakasimba, A-kirasi mhango chiridzwa (mazino emaoko-zvidimbu uye endoscopes), zvinogadzikwa zviridzwa, kupfeka machira uye erabha machubhu, nezvimwe.
MAST-H (Horizontal inotsvedza musuwo, 1000L-2000L)
MAST-H ndeimwe yemhando nyowani yenyika yeumhizha sterilizer ine hukuru hukuru hukuru ichipa otomatiki yakatetepa musuwo, kutonga zvine hungwaru, mashandiro akavimbika uye nyore kugadzirisa, zvinoenderana nemutengi wepamusoro ane zviyero zvakakura. Iyo inovandudzwa zvinoenderana nezvazvino zvinodiwa zvekurapa institution uye CSSD.
MAST-A inzira inokurumidza, yakaomarara uye inoshandisirwa sterilizer iyo inoongororwa nekuvandudzwa zvinoenderana nezvazvino zvinodiwa kuchipatara uye CSSD. Iyo yakagadzirirwa uye inogadzirwa inosanganisa yakakwira kugona nemutengo-unoshanda, nepo ichipa yakakwira kushanda kuvimbika uye nyore kugadzirisa.